World Archives - 24 News Press
Posted By: 24 News Presson: December 16, 2020
गोरखा । नेपालमा मात्र होइन गोरखा शब्दले आज विश्वभरि नै चर्चा पाएको छ । ऐतिहासिक भुरे–टाकुरे राजाहरुको शासनकालदेखि लिएर शाहवंशको सुरुवात भएको जिल्ला हो गोरखा । गोरखनाथ, गोरखकाली र मनकामनासमेत गोरखामा ऐतिहासिक धार्मिकस्थल छ । नेपालको भूगोलमा तिब्बती सीमादेखि तराईको जिल्लासँग जोडिएको जिल्ला पनि गोरखा हो । उत्तरी भेग अर्थात सिर्दिबासदेखि माथिका दुर्गम भूगोल जसलार्ई हिमालपारीको गोरखा भन्ने गरिन्छ । त्यहाँ रहेका मनास्लु, हिमालचुली, नाधी चुली, बौद्ध हिमालहरुले आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षण गराएको छ ।
पूर्वमा बुढीगण्डकी, पश्चिममा चेपे र मस्र्याङ्दी नदी, दक्षिणमा त्रिशूली नदी र उत्तरमा स्वशासित तिब्बत क्षेत्रको बीचमा रहेको गोरखा जिल्ला आजभोलि विदेशीहरु मात्र होइन स्वदेशी पर्यटकहरु पुग्ने गरेका छन् । गोरखा जिल्लाका गुरुङ समुदायका ग्रामीणबस्ती वारपाक, लाप्राक जस्ता रमणीय ठाउँहरु पर्यटकहरुको गन्तव्य भएको छ । गाउँघरको सफा वातावरण, होमस्टेको सुविधा, सडक यातायातको विस्तारले गर्दा गोरखा जिल्ला आजभोलि आन्तरिक एंव वाह्य पर्यटक भित्राउने जिल्लाको नाममा पर्न थालेको छ ।
गोरखाको इतिहास खोज्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पहिला उपत्यकाका यक्ष मल्ल, पाल्पाका मणि मुकुन्दसेन तथा जुम्लाका राजा जितारी मल्लका पालामा पनि नेपाल एकीकरणको प्रयास भएको पाइन्छ । त्यस बेला पाल्पा राज्य ठूलो थियो । गोरखा पनि पाल्पा राज्यको अधिनमा थियो । पाल्पाका राजा मणि मुकुन्दसेनको मृत्युपछि उनको छोराले गोरखा राज्यलाई आफ्नोे नियन्त्रणमा राख्न चाहेनन् ।
त्यसपछि विशाल गोरखा राज्य थुम, कोट र गाउँका मुखियाहरुले आफै राज्यको घोषणा गरी राज्य चलाउन थालेको इतिहास छ । यसरी राज्य विभाजन हुँदा लिगलिग, माझकोट, सिरानचोक, अजिरकोट र वारपाक जस्ता राज्यमा गोरखा विभाजन भयो । राज्य सञ्चालन गर्दा राजाको आवश्यकता पर्ने हुँदा लिगलिगकोटमा नया परम्पराको थालनी भयो । जुन परम्पराले प्रत्येक वर्ष विजया दशमीको दिन दौडबाट राजा छान्न थालियो । त्यसलाई लिगलिगकोटको दरबारबाट चेपेनदीको चेपेघाटसम्मलाई १३ कि।मि। को दूरी निर्धारण गरियो । राजा हुने दौड प्रतियोगिता वि।सं।१६१६ मा द्रव्यशाह राजा भएका थिए ।
नेपालको इतिहासमा नै गोरखा जिल्लाको पहिचान र महत्व छुट्टै रहेको छ । नेपाल एकीकरणको बेला ज्योतिषको ज्ञानबाट गणितीय शिक्षा दिने ज्योतिष कलानन्द ढकालको जन्म गोरखामा भएको थियो । साथै भिमसेन थापा, लखन थापा र दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मासँगको लडाइँमा वीरता कमाई भीसी पदक पाएका गजे घलेको घर पनि गोरखामा थियो । यसैगरी शाह वंशका राजाहरुमा पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभुपाल शाह,र पृथ्वीनारायण शाहको जन्म पनि गोरखामा नै भएको थियो ।
गोरखा बासीहरुका आराध्य देवता योगी गोरखनाथको नामबाट वा गाईको रक्षा गोरखामा गरिने ठाउँ भएकोले सोही आधारमा ठाउँको नाम गोरखा रहेको मानिन्छ । नेपाली भाषामा घाँसको फाँटलाई खर्क मानिने गरेकोमा खर्क शब्द विकृत भएर गर्ख, गर्खा हुँदाहुँदै गोरखा भएको पनि मानिन्छ । यो जिल्लामा घासका ठूला ठूला फाँटहरु खर्कहरु रहेका छन् । लिच्छवीकालमा पनि गोरखाको बारेमा चर्चा गरिएको छ । जयदेव द्वितीयको शिलालेखमा वर्णन भए अनुसार त्यस समयमा गोरखालाई केन्द्रबाट नै शासन गरिन्थ्यो । यहाँको एक ठाउँमा सिद्धपुरुष गोरखनाथ बाबाको मठ भएकोले सोही ठाउँको आधारमा जिल्लाको नामाकरण गरिएको मानिन्छ ।
राजसंस्थाको विलयपछि अहिले गोरखा जिल्लाको ऐतिहासिक स्थल धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनेका छन । गोरखा पुग्ने मानिसहरुले शाहवंशका पालाका दरबार, कोट र मठ–मन्दिरहरुको अवलोकन गर्ने गर्दछन् । पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको गोरखा दरबार यहाँको आकर्षणको केन्द्रको रुपमा रहेको छ । सदरमुकामबाट करीब ४० मिनेटको पैदल यात्रामा वा यातायातको साधनबाट पुग्न सकिने गोरखा दरबारले ऐतिहासिक महत्व राखेको छ । यो दरबार राजा रामशाहको पालामा नै निर्माण भएको हो भन्ने भनाइ छ । गोरखा बजारको मध्य भागमा रहेको अर्को दरबार पनि शाह वंशीय राजाहरुको इतिहाससँग जोडिएको छ । यस दरबारले मल्लकालीन वस्तुकलाको नमुनाका प्रस्तुत गरेको छ । यस दरबारको झ्याल ढोका र टुँडालहरुमा पौराणिक काष्ठकलाको नमुना देख्न पाइन्छ । गोरखा दरबारबाट करीव १ कि।मी। उत्तर पूर्वमा पर्ने उपल्लोकोट दृष्यावलोकनका लागि उपयुक्त स्थानको रुपमा रहेको छ । यस स्थलबाट बिहानीको सूर्योदयको रमणीय दृष्य हेर्न सकिन्छ । यस स्थलले ऐतिहासिक महत्व समेत बोकेको छ । हालको गोरखा दरबार निर्माण हुनु अघि राजा राम शाहको दरबार यसै स्थानमा रहेको मानिन्छ । गोरखा दरबारको नजिक गोरखनाथको मन्दिर एवं गुफा आकर्षणको अर्को केन्द्रको रुपमा रहेको छ ।
गोरखा बजारमा एउटा चौतारो छ । यस चौतारोलाई राजा राम शाहले न्याय दिने चौतारोको रुपमा चिनिन्छ ।
यसैलाई राम शाह चौतारो भनिन्छ । राम शाहले कुनै कचहरी, सभा, न्याय र उजुरी सुन्ने, महत्वपूर्ण निर्णय र न्यायका कार्यहरु सबै यसै चौतारोमा बसेर गर्थे भन्ने भनाइ छ । प्राकृतिक सुन्दरता, अनौठो भौगोलिक वातावरण, हिमालदेखि पहाडसम्म मैदानी भाग र ठूला टारले फैलिइएको छ गोरखा । ऐतिहासिक कोट, शक्तिपीठ र भुरेटाकुरे राजाहरुले निर्माण गरेका दरबार र कोटमौलामा बनेका मन्दिरहरु गोरखा जिल्लाका धरोहर हुन् । गोरखाको लिगलिगकोट ऐतिहासिक स्थल हो । हरेक क्षेत्रका हरेक कुराको इतिहास हुन्छ । इतिहासले नै सबैकुरा समेट्छ । त्यसैले होला गोरखाको ऐतिहासिक लिगलिगकोट अहिलेको अवस्थामा पर्यटकीय स्थल भएको छ । खसराज्य स्थापना हुनुभन्दा पहिले लिगलिगकोट मगरहरुको अधीनमा थियो । त्यसैले नाम पनि मगर भाषामा रहेको छ । मगर भाषामा लिङलिङको अर्थ सुन्दर दृष्य, हुन्छ ।
गोरखा जिल्लामा लिगलिगकोट बाहेक अन्य सानाठूला गरी ३६ वटा कोटहरु छन् । सबैभन्दा बढी अग्लोकोट अजीरकोट हंशपुरमा छ । जसको उचाइ ६ हजार ५०० मिटर रहेको छ । अन्य कोटहरुमा उपल्लोकोट, जुन हनुमान भन्ज्याङको पूर्वपट्टि उकालो चढेपछि भेटिने कोट हो । जुन कोटमा बज्र भैरवको मूर्ति छ । गोरखा जिल्लाका अन्य रमणीय पहाडको शृङ्खलामा रहेका अन्य कोटहरुमा मिरकोट, धुवाकोट, लकाङकोट, ताकुकोट, श्रीनाथकोट, बुङ्कोट जस्ता ऐतिहासिक कोट छन । तर पनि पश्चिम गोरखाको सामुन्द्रिक सतहबाट १ हजार ४ सय ३७ मिटर उचाइमा रहेको लिगलिगकोट ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनकि लिगलिगकोट आफैमा इतिहास हो । शाहवंशको राजतन्त्रको सुरुवात भएको ठाउसँग लिगलिगकोट जोडिएको छ । प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि लिगलिगकोट सुन्दर र महत्वपूर्ण छ । यहाँबाट मनास्लु हिमालको दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । लिगलिगकोटबाट गोरखा, लमजुङ र तनहूँका अधिकांश भूगोल पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ । गोरखा जिल्लाको दक्षिण सीमामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थल मनकामना हो ।
चाहे धर्मको लागि होस् अथवा शैक्षिक भ्रमणको लागि होस् मेची महाकालीका मानिस मनकामना पुग्ने गरेका छन् । मनकामना पुगेपछि त्यहाँ हेर्नुपर्ने ऐतिहासिक महत्वका स्थलहरु कतिपयले थाहा नपाउँदा केवल मन्दिरको दर्शन गरेर मात्र फर्किनेहरुको संख्या पनि कमी छैन । मनकामना माइको ऐतिहासिक कुरा सिद्ध लखन थापाको नामसँग जोडिएको छ । मनकामना पुगेपछि त्यहाँबाट अध्ययन गर्न सकिने धेरै कुराहरु रहेका छन् । धार्मिक कुरा त छँदै छ, चाहे प्रकृति प्रेमीहोस् अथवा संस्कृति प्रेमी सबैलाई अध्ययनस्थल मनकामना बनेको छ । मनकामना मन्दिरको बारेमा राजाराम शाहको नाम जोडिएको छ । आजभन्दा करिब तीन सय वर्षअघि हाल मनकामना देवीको मन्दिर भएको ठाउँमा एउटा किसानले हलोजोत्दा एउटा ढुंगामा ठेस लागेको र ढुंगाबाट दूध र रगत बग्न थालेछ । यो सुनेपछि लखन थापाले त्यहाँ तान्त्रिक पूजा गरेपछि रगत रोकिएछ । यो घटनापछि गोरखाका राजाले मनकामना माईको सेवा गर्न लखन थापा र उनका दरसन्तानलाई जग्गा बिर्ता दिई लालमोहर गरिदिए छन् । यहाँका मूल पुजारी सुरुदेखि हालसम्म पनि रैथाने थापामगर छन् । हालको मगर पुजारी पनि लखन थापाको १७ औं पुस्ताका सन्तान हुन् ।
घले तथा गुरुङ जातिको संस्कृति, रहनसहन र पहिचान बुझ्न एकपटक पुग्नैपर्ने ठाउँ हो, गोरखाको बारपाक जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय गाउँको पहिचान कमाएको बारपाक गोरखा सदरमुकामदेखि एकदिनको पैदल दूरीमा पर्छ । आजभोलि सडक यातायात समेतको सुबिधा छ । ०७२ सालको बिनासकारी भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको बारपाक अहिले व्यवस्थित तरिकाले पुनः निर्माण भएको छ । दरौंदी नदीको किनारैकिनार पुगिने बारपाक जाँदा प्रसिद्ध दर्जनांै झरना र धेरै हिमशृंखला देख्न सकिन्छ । एक हजार एक सय ५० घरधुरी भएको बारपाकमा घले जातिको बाहुल्य छ । बारपाकमा नेपालकै सुन्दर गाउँहरुमध्ये अग्रस्थानमा रहेको बारपाकमा स्थानीयहरुले पर्यटकका लागि होमस्टेको समेत व्यवस्था गरेका छन् । पर्यटकलाई बारपाक प्रवेशद्वारबाट झ्याइँझ्याइँ बाजा बजाएर स्वागत गरिन्छ । बाजागाजा सगँसँगै गाउँ घुमाई स्थानीय परिकार गहुँको केक खान दिने, अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नेसमेत गर्ने गरेका छन् । बारपाकीहरुले सबैजसो घरहरुमा भेडाको मासु, सिस्नुको तरकारी, ढिडो, खान पाउँछन् । बारपाक जाने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकले मदिराका पारखीहरुलाई चाख्नकै लागि मात्र स्थानीय स्तरमा बनाइएको आधा गिलास रक्सी पनि दिइन्छ ।
गोरखा अपार जल भण्डार भएको जिल्ला हो । लार्के र ग्याला भन्ज्याङ्गको संगमस्थानबाट बुढीगण्डकी बग्दै आएको छ । यस नदीमा हिमालपारिको सामागाँउदेखि स्यारखोला, चुलिङग खोला, माछाखोला, नाबुङग खोला, थारुखोला, दोभान खोला, रिचिटे खोलाहरु बेनीघाटमा पुगेर त्रिशूली नदीमा मिसिन्छ । गोरखा जिल्लाको मध्य भागमा बग्ने नदीको नाम हो दरौदी । यो नदीको मुहान बौद्ध हिमालको फेंदीमा पर्ने रुपीनाला भञ्ज्याङगमा रहेको नारदकुण्ड हो । दरादी खोलामा भुसुण्डिखार, चुँदी, लाङदी, हाँडीखोला, लुदीखोला, शम्भु, जराङग, राङगरुङ खोलाहरु मिसिदै आबुँखैरेनीमा पुगेर मस्याङ्दी नदीमा मिसिन्छ । चेपेनदी ऐसिहासिक नदी पनि हो । जुन नदीमा द्रव्यशाह र नरहरि शाहको झगडा मिलाउन उनको आमाले दशधारा दूध बगाएकी थिइन । गोरखाको पश्चिम सीमाना भएर बग्ने चेपेनदीको शिर दूधपोखरी हो । चेपेनदीमा गोरखा जिल्लाबाट मिदीखोला, साहीखोला, स्वारखोला, कदलीखोला मिसिन्छ भने लमजुङगबाट कुएलेखोला चिल्लीखोला र बोराङखोला मिसिदै मस्र्याङदी नदीमा मिसिन्छ ।
सामागाउँ गुम्बा टोलमा वीरेन्द्र ताल अर्थात स्थानीय भाषामा ग्यागोलाच्छो भनिने ताल छ । छेकम्पारको छोसोङमा हिम नदीबाट बनेको ताल छ । यो ताल मुगुम्बा र देरोन गुम्बाको ठिक माथि रहेको छ । ठूलो दूधपोखरी उत्तरी गोरखाको उहियामा रहेको छ । सानो दूधपोखरी पोखरी खरीबोटको बौद्ध हिमालको फेदीमा रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्ने गोरखा जिल्ला अहिले गोरखा र पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक, अजिरकोट, सुलिकोट, आरुघाट, गण्डकी, चुमनुब्री, धार्चे, भीमसेन गाउँपालिका समेत गरी १० स्थानीय तह भएको छ । भौगोलिक स्थिति अनुसार यो जिल्ला २७.१५ डिग्रीदेखि २८.१५ डिग्री अक्षांश र ८४.२७ डिग्रीदेखि ८४.५८ डिग्री देशान्तरमा अवस्थित छ । साथै यसको कूल क्षेत्रफल ३६१० वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यो जिल्ला समुद्र सतहदेखि करिब २२८ मिटरदेखि ८१६३ मिटरसम्मको उचाइँमा रहेर उत्तर दक्षिण फैलिएको भूगोल छ । सुन्तला एव अन्य फलफूल उत्पादनमा गोरखा जिल्ला अगाडि रहेको छ ।
मरस्याङ्दी नदी किनारका पालुङ्टार, च्याङ्लीटार, विरुवाटार र बुढीगण्डकी किनारको दर्वुङ्टार, क्यामुनटार मात्र नभएर मध्य गोरखा जिल्लाको दरौदी खोला आसपासका उर्बर खेतीयोग्य जमिनले गोरखालाई कृषि क्षेत्रमा उत्साह बढाएको छ ।सडक यातायातले गोरखा जिल्लालाई आजभोलि धेरै सुविधा बनाएको छ । काठमाण्डौ–गोरखा मात्र नभएर जिल्लाको पूर्वी सीमामा पर्ने आरुघाटमा समेत सडक यातायात चल्न थालेका छन् । त्यसैगरी पश्चिम भेगको छेपेटार, पारपाक, आँपपिपल, हरिभन्ज्याङ्, लाङ्दी जस्ता पहाडी ग्रामीण बस्तीमा समेत मोटर पुगेको छ । चार दशक अगाडिसम्म हवाइ मैदान रहेको पालुङटारमा भने आज भोलि गौ चरणमा परिवर्तन भएको छ । तर सडक यातायातले भने पालुङटार, ठाटीपोखरी, च्याङलीटार र विरुवाटार समेतका ग्रामीण बस्तीमा सुविधा भएको छ । गोरखा पुगौ, ऐतिहासिक धार्मिक र प्राकृतिक मनोरम दृष्यको अवलोकन गरौं ।
ग्लोबल गोरखा समाजको आयोजनामा “विकाशका लागी बहस” कार्यक्रम हुदै
Posted By: 24 News Presson: December 11, 2020
लण्डन, ग्लोबल गोरखा समाज, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद “कृषि विभाग” को आयोजनामा सन २०२०-१२- १३ तारिख आईतबार दिन नेपाली समय साँझ ५ बजे “विकाशका लागी बहस” कृषि विशेषज्ञहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम तय गरेको छ।
विनय अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको संस्थाले विषयगत समिति अन्तर्गत ऊपाध्यक्ष सहित कृषि विभागको जिम्मेवारी अमेरिका निवासी नारायण भट्ट (भिमसेन थापा गाँऊपालीका) लाई दिए पश्चात विश्वभर छरिएर रहेका गोरखाली दिग्गज व्यक्तित्व,कृषि विशेषज्ञहरु संग समग्र गोरखा र गोरखाली लाई टेवा पुर्याऊने अभिप्रायले अन्तक्रिया सन्चालन गर्न लागिएको बताईएको छ।
संस्थाले समाजका उपाध्यक्ष गोकर्ण प्रसाद ढकाललाई, कार्यक्रमको प्राविधिक तर्फको जिम्मेवारी दिएको छ भने संस्थाका प्रवक्ता लामो समय News24 टेलिभिजनमा रहेर व्यवसायिक पत्रकारिता गर्नु भएका पत्रकार यादव देवकोटा, लाई कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सो कार्यक्रममा आमन्त्रित व्यक्तित्वका रुपमा वरिष्ठ कृषि अर्थविद नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छि विकाश मन्त्रालय,राष्ट्रिय किसान आयोग काठमाडौका डाल प्रसाद पुडासैनी, समाजका सल्लाहाकार द्वय डा. ठाकुर भट्टराई (सिनियर वैज्ञानिक, कार्बन लिन्क अष्ट्रेलिया, सिनियर रिसर्च फेलो, सिक्यु युनिभर्सिटि अष्ट्रेलिया) डा. प्रदिप वाग्ले (वैज्ञानिक युएसडिए ,अमेरिका), डा. एलपि अँगाई (डिन एग्रिकल्चर, फार वेस्टन युनिभर्सिटि,टिकापुर कैलालि ), डा. कृष्ण देवकोटा (उप-प्राध्यापक UM6P विश्व विधालय,मोरक्को ) र धर्म प्रसाद तिवारी (विजनेश ईन्भेष्टर,जापान) लगाएतका व्यक्तित्वहरु संग समग्र गोरखा जिल्ला भित्र गर्न सकिने कृषिको बारेमा बहस गरिने कुरा समाजका सचिव विराट खनालले जानकारी गराऊनु भयो ।
सेफ सन्तोष शाह बीबीसी मास्टर सेफको फाईनलमा पुग्न सफल
लन्डन । बिहिबार साँझ बीबीसीबाट प्रसारित ‘मास्टर सेफ यूके २०२०’ को दोश्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै सन्तोष फाईनलमा पुग्न सफल भएका छन् ।
नेपाली मूलका ब्रिटेनमा बसोबास गर्ने सेफ सन्तोष बबीसीबाट प्रसारण हुने विश्वकै प्रतिष्ठित हस्पिटालिटी क्षेत्रको टिभी रियालिटी शो ‘मास्टर सेफ प्रोफेशनल यूके प्रतियोगिता २०२०’ को १६ औं संस्करणको फाईनलमा प्रवेश गर्न सफल भएका हुन् ।धेरै जसो बेलायतमै जन्मेका सेफहरू सहभागी रहेको सो प्रतिस्पर्धी उनले चुनौतीको रुपमा लिएको बताए ।
लण्डनको प्रख्यात सेफहरु सग प्रशिक्षणसँगै काम गरिसकेका सन्तोष मास्टर सेफ प्रोफेशनल यूके मार्फत नेपालका विभिन्न प्रकारका खानालाई विश्वभरका लाखौँ मानिसहरुलाई परिचित गराएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अघि बढाउने उनको लक्ष्य लिएका छन् ।इण्डियन कुइजिनबाट वर्षौंदेखि संगालेको अनुभवका आधारमा नेपाली खानालाई अघि बढाउन प्रयत्नरत छन् सन्तोष ।
सन्तोषले आफ्नो पाक कला देखाएर फाईनलमा पुग्न सफल भएका छन् ।सन्तोषले मास्टर सेफको टप ८ प्रतिस्पर्धीमा यःमरि , क्रिस्पी “ चिकन चिल्ली “ चाईनिज-इन्डियन स्टाइलको साथ क्रिस्पी कमलका जराहरू, सि वीडको अचार, भेजीटेबल अचार, तातो र अमिलो सूप र क्रिस्पी नूडल्स बनाएका थिए ।
Posted By: 24 News Presson: November 30, 2020
लण्डन , ग्लोबलगोरखा समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदद्वारा गोरखाका सबै स्थानिय तहलाई आज स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरिएको छ ।जिल्लामा रहेको ११ वटा स्थानिय तहहरु गोरखा र पालुङटार नगरपालिका तथा चुमनुब्री, धार्चे, आरुघाट, भीमसेन थापा, शहिद लखन, गण्डकी, सिरानचोक, बारपाक सुलिकोट र अजिरकोट गाउँपालिकालाई एक कार्यक्रम गरि स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग हस्तान्तरण गरिएको समाजका अध्यक्ष बिनय अधिकारीले जानकारी दिनु भयो ।गोरखा बजारमा आयोजित सस्थाका नेपाल प्रतिनिधी बिनोद पोखरेलले जिल्लाका सबै स्थानिय तहलाई मास्क र ज्वराे नाप्ने थर्मल गन हस्त्तान्तरण गर्नु भएको समाजका उपाध्यक्ष एवं स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमका संयोजक गोकर्ण प्रसाद ढकालले जानकारी दिनु भयो ।समाजको हालै सम्पन्न अधिवेशन पछिको पहिलो बैठकले गोरखाका सबै तहमा स्वास्थ्य सामाग्री दिने निर्णय गरे लगत्तै स्थानिय तहलाई सो सामाग्री सहयोग हस्तान्तरण गरीएको हो ।
समाजले ११ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैया बरावरको स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरेको समाजका कोषाध्यक्ष तथा कालिका दैनिकका निर्देशक आकाश बन्जाराले टेलिफोनमा जानकारी दिनु भयो ।जिल्लाका सबै स्थानिय तहलाई १३/१३ हजार थान मास्क र ३०/३० थान थर्मल गन सहयोग गरिएको छ ।त्यस्तै गरी समाजले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गोरखालाई १० हजार थान मास्क र १० थान थर्मल गन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखालाई ७ हजार थान माक्स र १० थान थर्मल गन, जिल्ला समन्वय समिती गोरखालाई २ हजार थान माक्स र २ थान थर्मल गन तथा नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखा शाखालाई २ हजार थान मास्क र १ थान थर्मल गन समेत हस्तान्तरण गरिएको थियो ।सो कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति गोरखालाई ग्लोबल गोरखा समाजका नेपाल प्रतिनिधी बिनोद पोखरेलले सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो भने सबै स्थानिय तहलाई जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङले हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
सो कार्यक्रममा सबै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको समाजका सचिव विराट बाबु खनालले जानकारी दिनु भयो । हस्तान्तरण कार्यक्रम हुनु अगाडि समाजले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि कोरोनाले नेपालमा परेको असर र समाजको तर्फबाट गर्न सक्ने योगदानको बारेमा छलफल भएको समाजका प्रबक्ता यादव देवकोटाले जानकारी दिनु भयो समाजले यस अगाडी पनि गोरखाको विभिन्न स्थानमा सहयोगहरु गर्दै आएको ग्लोबल गोरखा समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष बिनय अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सो समाजमा गोरखामा जन्मिएर बिश्वभर रहेका नेपालीहरु संगठित भएका छन ।ग्लोबल गोरखा समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यहरु तपशिल रहनु भएको छ।
१, विनय अधिकारी (अध्यक्ष,बेलायत, गण्डकी गापा)उपाध्यक्षहरु २, गोकर्ण ढकाल (हङकङ, सिरानचोक गापा)३, नारायण भट्ट (युएसय, भिमसेन गापा )४, यदु लामिछाने (द. कोरिया, शहिद लखन गापा)५, श्री कृष्ण भट्ट ( दुबई)६, बिनिता रेग्मी खनाल (स्पेन)७, रश्मी थापा मगर (क्यानडा)८, त्रिलोचन पोखरेल (महासचिव,अष्ट्रेलिया)सचिवहरु ९, विराट बाबु खनाल (गण्डकी,जापान)१०, शकुन्तला गुरुङ (सिरानचोक,बेलायत)११, प्रकाश बन्जारा (कतार)१२, आकाश बन्जारा (कोषाध्यक्ष,हङकङ, आरुघाट)१३, बम बहादुर गुरुङ सह कोषाध्यक्ष, बेलायत, गण्डकी)१४, यादव देवकोटा (प्रवक्ता,भिमसेन ,पोर्चुगल)१५,बिनोद पोखरेल (नेपाल संयोजक,पा,न.पा.) केन्द्रीय सदस्यहरु १६, दिल गुरुङ१७, रितार दोर्जे लामा (ताईवान)१८, ऊर्मिला घले (हङकङ )१९, कृष्ण प्रसाद बगाले२०, प्रकाश बस्ताकोटी (अष्ट्रेलिया)२१, कमला लम्साल काप्री (जापान, शहिद लखन)२२, सन्जिव पन्त (युएसए, गण्डकी )२३, विष्णु प्रसाद पन्त (युएसए, गण्डकी)२४, खगेश्वर अधिकारी२५, प्रकाश भट्टराई२६, कुल बहादुर वस्ती२७, प्रताप बगाले२८, ज्ञानेन्द्र न्यौपाने२८, रामचन्द्र ढकाल३०, बासु अर्याल (गो.न.पा,जर्मनी)३१, हरि थापा (पोर्चुगल)३२, देवी प्र. अधिकारी (३३, मनिशा भट्ट (स्पेन)३४, मोती गुरुंग (जापान ,अजिरकोट)३५, राम घले३६, मनोहर रेग्मी३७, सुरेन्द्र काप्री३८, किरण बहादुर गुरुङग३९, कर्ण मगर४०, रामजी खत्री (पालुङटार, हाल कतार)४१, डा. सृष्टि पोखरेल४२, बिनिता अर्याल४३, पदम गुरुङ४४, शंकर लामिछाने४५, रमेश गुरुंग४६, निर्मला अधिकारी४७, खोप गुरुङग४८, तुल्सी अँगाई४९, विक्रम घिमिरे
डा.ठाकुर भट्टराई ( अष्ट्रेलिया
)इन बहादुर गुरुङ ( हङकङ )
डिल्ली ढकाल ( अष्ट्रेलिया
मनिश कुमार अमात्य ( जापान
विदेशमा यो साता कोरोनाबाट थप ६ जना नेपालीको निधन
Posted By: 24 News Presson: November 29, 2020
लन्डन : कोभिड–१९का कारण यो साता थप ६ जना गैरआवासीय नेपालीको निधन भएको छ । यो संगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने गैरआवासीय नेपालीको संख्या २ सय ९९ जना पुगेको छ । हालसम्म विभिन्न १९ मुलुकमा रहेका नेपालीको निधन भएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता साउदी अरबमा ४ जना, पोर्चुगलमा १ जना र युकेमा १ जना नेपालीको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको हो । स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सन्जीव सापकोटाका अनुसार यो साता जापान, युके, स्पेन, साइप्रस, रोमानिया, कतार, यूएई र साउदी अरबमा रहेका नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । शनिबार सााझसम्म विभिन्न ४५ मुलुकमा ४७ हजार ५ सय ८३ जना गैरआवासीय नेपाली संक्रमित भएकोमा हालसम्म ४३ हजार ५ सय ७४ जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका हुन् । यो कुल संक्रमित मध्येको ९१ प्रतिशत रहेको छ ।
हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको कुल संख्या २ लाख ११ हजार १ सय ८६ पुगेको छ । ती मध्ये २ लाख ३० हजार ७ सय २३ जना कोरोना मुक्त भएका छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या ९२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले १ हजार ४ सय ५४ जनाको ज्यान गएको छ ।
एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय बैठक तथा विज्ञ सम्मेलन आजबाट शूरु हुँदै
Posted By: 24 News Presson: October 03, 2020
काठमाडौं : गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूरोप क्षेत्रको १३ औं युरोपेली बैठक, ११ औँ क्षेत्रीय महिला भेला तथा दोस्रो यूरोपेली ज्ञान सम्मेलन आजदेखि शूरु हुँदैछ । सम्मेलन आयोजक समिति संयोजक तथा एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यका अनुसार कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।
बैठकको उद्घाटन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले गर्नुहुने कार्यक्रम छ । बैठकमा पूर्व मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ । साथै एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरु क्रमश: उपेन्द्र महत्तो, देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, शेष घले, भवन भट्, अध्यक्ष कुमार पन्त, संरक्षक रामप्रताप थापा, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा, नेकपा नेता गंगालाल तुलाधर लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
कार्यक्रममा विज्ञ भेला, महिला भेला, युवा भेला, गोरखार्ज र नेपाली नागरिकताको निरन्तरता लगायतका विभिन्न सेसनहरु सञ्चालन हुँदैछन् । जसको लागि यूरोप क्षेत्रका तीन जना क्षेत्रीय उप संयोजकहरु क्रमश मुक्त गुरुङले एनसीसीहरुको गतिविधी तथा प्रगती प्रतिबेदनको संयोजन, शुक्रराज न्यौपानेले प्रचार प्रसार र मिडियाको संयोजन र कृष्ण तिमील्सिनाले आईसिसीसँग समन्वय गरिरहनु भएको छ ।
महिलाहरुको सेसनको लागि महिला संयोजक योगीता थापा र युबाहरुको लागि युवा संयोेजक जयक्रिष्ण ठाकुरको टिमले समन्वय गर्नुभएको छ । दोस्रो यूरोपेली ज्ञान सम्मेलनको लागि राजु अर्यालले संयोजन गर्नुभएको छ । ज्ञान सम्मेलनमा स्वास्थ्य र चिकित्सा, उर्जा र वातावरण, पूर्वाधार लगायतका ५ ओटा सत्रमा विभिन्न विज्ञहरुको कार्यपत्रहरु प्रस्तुत हुनेछ ।
भर्चुअल रूपमा आयोजना हुन लागेको यस वर्षको सम्मेलनको मूल नारा “मातृभूमिको लागि सिप र ज्ञान, महिला तथा युवा आवाजको लागि हाम्रो अभियान” रहेको छ ।